မယ်သံ: ကျန်းမာဘေးကင်းရောဂါရှင်း ဖို့ အစားအစာ ရွေးချယ်စားစို့
မဒမ်ကိုး October 3, 2013 at 12:58 PM
ဒီပိုစ့်လေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြိးတင်ပါတယ်မမ . နောက်လင့်တွေအတွက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် <3 <3 <3
Thandar Lwin October 3, 2013 at 1:03 PM
ကူးကူးလှိုင် October 3, 2013 at 2:11 PM
ဖတ်သွား မှတ်သွားပါတယ် အစ်မရေ...
Thetmar October 3, 2013 at 7:09 PM
Thandar Lwin October 4, 2013 at 11:01 AM
San Htun October 3, 2013 at 9:59 PM
Thandar Lwin October 4, 2013 at 11:00 AM
Thank you so much Madam Koe. Please continue to write this kind of health awareness articles for all of us really need to know. I had kidney transplant over 10 yrs ago so I need to be careful what I put into my mouth. There'salot of people out there like us.
Ma Soe Soe Htoo
လာဖတ်တာ ကျေးဇူးပါရှင် ။ ကျမ က မဒမ်ကိုးတော့ မဟုတ်ပါ :P
NSA October 4, 2013 at 4:11 AM
Thandar Lwin October 4, 2013 at 10:59 AM
ငါက သူများတွေလို ဒေတာ တိတိကျကျ နဲ့ မရေးနိုင် မရေးတတ်လိှု့ရက်ေနတာဟ
သက်ဝေ October 4, 2013 at 4:33 PM
Nice post ညီမ...
အမလည်း ရေးရအုံးမယ်...း-)